အိမ်မှကျောင်းပျက်ကွက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် | ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
ကျောင်းပျက်တာကို အိမ်ကနေ ကာကွယ်ပါ။
Maite Ncuesa | 14/01/2022 23:40 | အဆင့်မြှင့်တင် 14/01/2022 23:44 | အကြံပေးချက်များ
ဗဟုသုတရလိုစိတ်၊ စာဖတ်ခြင်း နှင့် စပ်စုလိုစိတ်တို့သည် အိမ်တွင် ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်သော ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုတားဆီးရမလဲ ကျောင်းပျက်ကွက်မှု အိမ်မှ? လေ့ကျင့်ရေးနှင့် လေ့လာရေးတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြံဥာဏ်အချို့ကို မျှဝေပါသည်။
1 1. ဗဟိုနှင့် ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပါ။
2 2. မိဘအုပ်ထိန်းကျောင်းများတက်ပါ။
3 3. Effort-Focused Positive Reinforcement ကို မြှင့်တင်ပါ။
4 4. အိမ်မှာ စာအုပ်တွေနဲ့ ထိတွေ့မှုကို မြှင့်တင်ပါ။
5 5. အဖြေများကိုရှာဖွေပါ။
6 6. အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာဖွေရာတွင် အတူလိုက်ပါပါ။
1. ဗဟိုနှင့် ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပါ။
မိဘများသည် ပညာရေးစင်တာတွင် အလုပ်လုပ်သော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်သွယ်နိုင်စေရန်အတွက် မိဘများ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ဤဆွေးနွေးပွဲသည် ကျောင်းသားကိုယ်တိုင်အပေါ် အပြုသဘောဆောင်သော လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ လေယာဉ်နှစ်စင်းလုံးသည် အဆက်မပြတ် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေကြောင်း မှတ်သားထားပါ။ ဥပမာ, ကျောင်းစွမ်းဆောင်ရည် ဆိုးရွားလာခြင်းသည် မိသားစုတွင်း အခြေအနေနှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည်။.
ကလေးများသည် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတွင် သင်ယူမှုနှင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုခရီးကို စတင်ခဲ့ပြီး ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ဆက်သွားနေသည့် ခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖခင်များနှင့် မိခင်များသည် ကျောင်းသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နိုင်သည်။ ဤရှုထောင့်မှနေ၍ ၎င်းတို့သည် အရင်းအမြစ်များ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အသိပညာ၊ အရည်အချင်းများနှင့် ကိရိယာအသစ်များကို ရယူကြသည်။ ဖေဖေမေမေတို့အတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို တက်ရောက်ခြင်းသည် မှတ်သားထားရမည့် အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးဖြင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမည့် လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှု။
3. Effort-Focused Positive Reinforcement ကို မြှင့်တင်ပါ။
စာမေးပွဲရလဒ်သည် ခိုင်မာသော အကဲဖြတ်မှုကို ပြသသည်။ ဒါပေမယ့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အားဖြည့်မှုဟာ ရလဒ်တွေအပေါ်မှာပဲ အာရုံစိုက်မနေသင့်ပါဘူး။ အားထုတ်မှုကိုယ်တိုင်က အသိအမှတ်ပြုထိုက်တယ်။ လူတစ်ဦးသည် ပန်းတိုင်တစ်ခုသို့ရောက်ရန် အချိန်ပိုလိုအပ်ပေမည်။. ဒါပေမယ့် သင်ချစ်ရသူတွေရဲ့ လိုက်ဖက်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမှုကို သင်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
4. အိမ်မှာ စာအုပ်တွေနဲ့ ထိတွေ့မှုကို မြှင့်တင်ပါ။
ကလေးဘဝနှင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင် စာဖတ်ခြင်းမေတ္တာကို မည်သို့နိုးထစေမည်နည်း။ သင်၏နေ့စဉ်ဥပမာအားဖြင့် အတုယူရန် အဆင်ပြေသည်။. စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသော ဖခင်များနှင့် မိခင်များသည် သားသမီးများကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုနိုင်သည့် မှန်တစ်ချပ်ကို ပြသကြသည်။ ထိုနည်းအတူ အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ စာအုပ်တွေ လေ့လာမှုဧရိယာကျော်လွန်။ ဧည့်ခန်းထဲမှာလည်း ရှိနိုင်တယ်။
ရုပ်ရှင်၊ ဓာတ်ပုံ၊ အနုပညာ၊ ဂီတ၊ ပြဇာတ်...။
ကျောင်းပျက်ကွက်မှုသည် ချက်ချင်းအကောင်အထည်မဖော်သော်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို ပြသနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပျက်နေသော အခြေအနေများကို စေ့စေ့စပ်စပ် နားလည်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ ထို့အပြင် မတူညီသော ပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာ အခြားရွေးချယ်စရာများကို အကဲဖြတ်ရန်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျောင်းသားသည် ဘာသာရပ်တစ်ခုတွင် ၎င်းတို့၏အဆင့်များကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ပြန်လည်ကုစားသည့်အတန်းများ လိုအပ်နိုင်သည်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွင် အပြုသဘောဆောင်သော အပြောင်းအလဲများကို ဆောင်ကြဉ်းရန် လေ့လာမှုအလေ့အထများကို လေ့လာရန် လိုအပ်ပေမည်။ လေ့လာမှုနည်းပညာအသစ်များကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်နိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပိုဆိုးလာသော ပညာရေးရလဒ်များသည် ကျောင်းသား၏ မိမိကိုယ်ကို လေးစားမှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအဆင့်က အားနည်းလာပြီး လာမယ့်စာမေးပွဲမှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကို အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ ကြိုတင်မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ ထို့ကြောင့် အထူးပြုစိတ်ပညာရှင်၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုသည် အဓိကကျပါသည်။
6. အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာဖွေရာတွင် အတူလိုက်ပါပါ။
လူတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့နှစ်သက်သည့်အကြောင်းအရာကို လေ့လာသောအခါတွင် ၎င်းတို့အား ငြီးငွေ့စေသော အကြောင်းအရာကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းထက် စိတ်အားထက်သန်မှု ပိုခံစားရသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို ရှာဖွေခြင်းသည် စူးစမ်းခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကို အသိပညာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် လူသားသည် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆရာမများနှင့် မိသားစု၏အကူအညီဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို နာမည်ပေးပါ။. သားဖြစ်သူ၏ ခြေလှမ်းများကို တိကျသော ဦးတည်ရာသို့ ညွှန်ပြရန် မျှော်လင့်ချက်ကို ထားရန်မှာ အဆင်ပြေသည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မစ်ရှင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လွတ်လပ်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရမည်။
ထို့ကြောင့် ကျောင်းပျက်ကွက်ခြင်းကို အိမ်မှကာကွယ်ခြင်းသည် လိုအပ်သော ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ မိဘများနှင့် ဆရာများသည် ပြီးပြည့်စုံသော စည်းလုံးညီညွတ်သော အသင်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရရှိနိုင်သော မတူညီသော လမ်းကြောင်းများမှတဆင့် ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ အထူးပြုအကူအညီတောင်းရန် လိုအပ်သော်လည်း၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » NOTICIAS » အကြံပေးချက်များ » ကျောင်းပျက်တာကို အိမ်ကနေ ကာကွယ်ပါ။
Criminology ဆိုတာ ဘာလဲ။